“Qaadista & sixitaanka imtixaanaadka waxaa iska lahaa waftiga Turkiga …Sixitaanka imtixaanaadka waxaa loo fariistay 12:30-kii, waxaana ay soo saareen natiijada 7-dii fiidnimo.” Agaasimaha xafiiska …imtixaanaadka ee Puntland. – Radio Daljir
“Qaadista & sixitaanka imtixaanaadka waxaa iska lahaa waftiga Turkiga …Sixitaanka imtixaanaadka waxaa loo fariistay 12:30-kii, waxaana ay soo saareen natiijada 7-dii fiidnimo.” Agaasimaha xafiiska …imtixaanaadka ee Puntland.
Garowe, Sept 26 – Agaasimaha xafiiska imtixaanaadka ee wasaarada waxbarashada ee Puntland Axmed Maxamuud Warsame ayaa sheegay in aanay jirin wax musuqmaasuq ah oo lagu sameeyey maamulka iyo maaraynta deeqda waxbarasho oo dalka Turkiga, tafaasiilna ka bixiyey hannaanka loo maamulay deeqda waxbarasho, iyo cidda maamushay.
Md. Warsame oo u warramay saxaafada ayaa sheegay in gebi ahaanba maamulka iyo maaraynta deeqda waxbarasho ay ahayd mid ku jirtay gacanta waftifa Turkiga, dawrka wasaarada waxbarashaduna uu ahaa mid taageero iyo u-sahlid waftigu in ay qaadaan imtixaanaadka.
Waxaa uu sheegay in imtixaanaadka ay ka bilaabmeen Galkacyo 20-kii September, ayna u fariisteen laba kun iyo dhawr boqon oo arday; 63 arday ayaa natiijada imtixaanaadka Galkacyo ka soo baxay, oo 40 ka mid ahi ay yihiin jaamacad, halka 23-ka kalena ay yihiin dugsi sare. Ardayda ayaa ka kala timid gobollada Somaliya oo dhan.
23-kii bisha September ayaa sidoo kale imtixaanaadka loo fariistay magaalada Garowe, waxaa u fariistay 4,000 oo arday oo ka kala timid gobollada Puntland oo dhan. Waxaa ka soo baxay ardaydaaas 55 arday oo 42 arday ay heleen fursado jaamacadeed, halka 11-ka kalena ay heleen waxbarasho …
Md. Muuse oo tafaasiil dheeraad ah ka bixiyey sida gobol ahaan ay ardayda Garowe imtixaanaadka u fariistay u kala heleen waxbarashada ayaa iclaamiyey tirada gobol kastsa ka heshay waxbarashada.
– Nugaal: 14 arday,
– Sool: 12 arday,
– Bari: 7 arday
– Karkaar: 4 arday,
– Cayn: 1 arday,
– Mudug: 4 arday.
Waxaa kale oo helay waxbarasho arday ka soo baxay dugsiga Maxamuud Axmed Cali ee magaalada Hargeysa.
Agaaimaha ayaa beeniyey in imtixaanaadka lagu saxay hal saac gudahood.
Waxaa uu sheegay in sixitaanka imtixaanaadka uu waftigu u fariistay 12:30 duhurnimo, ayna shaaciyeen natiijada imtixaanaadka 7-dii fiidnimo, taas oo ka dhigaysa muddada sixitaanka imtixaanaadku uu socday lix saac iyo bar (6 saac 1/2 nus).
Md. Warsame waxaa uu ku celiyey in mas’uuliyada, qaadista, iyo sixitaanka imtixaanaadka intaba ay iska lahaayeen waftiga dawlada Turkigu.
Hadalka Md. Warsame ayaa jawaab u ah dood ka dhalatay habka imtixaanaadka loo qaaday, iyo musuqmaasuq la sheegay in uu dhacay.